Cilmiga Diinta ee Masiixiga, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Hawsha Kaniisadda Dunida ee Ilaah oo dhan (WKG) waa in lala shaqeeyo Ciise si loo noolaado oo injiilka loogu wacdiyo. Fahamkeenna Ciise iyo warkiisa wanaagsan ee nimcadiisa ayaa aasaas ahaan loo beddelay iyada oo loo marayo dib-u-habayn xagga waxbaristeenna ah tobankii sano ee u dambaysay qarnigii 20-aad. Sidaas darteed, caqiidooyinka hadda jira ee WKG waxay sidoo kale la safan yihiin caqiidooyinka kitaabiga ah ee caqiidada caqiido-dhaqameedka Masiixiga ah.
Hadda oo aan ku jirno tobankii sano ee ugu horreeyay qarnigii 21aad, beddelka WKG wuxuu sii wadaa isaga oo diiradda saaraya dib u habaynta fiqi ahaaneed. Wax ka beddelkan ayaa aasaas u ah kaas oo siinaya dhammaan waxbarista WKG in la adkeeyo - waa jawaabta su'aasha fiqi ahaaneed ee aadka muhiimka u ah:
Yuu yahay Ciise
Waa ayo erayga ugu muhiimsan ee su’aashan. Wadnaha fiqiga ma aha fikrad ama nidaam, laakiin waa qof nool, Ciise Masiix. Waa kuma qofkaasi Isagu waa gebi ahaanba Ilaah, isagoo mid ah Aabbaha iyo Ruuxa Quduuska ah, oo ah qofka labaad ee Saddexanka, oo isagu isagu waa bini aadam, isagoo wada jir u wada leh aadanaha oo dhan. Ciise Masiix waa wadajirka u gaarka ah Ilaah iyo dadka. Ma ahan oo keliya diiradda saarista cilmi baaristayada cilmiga, Ciise waa nolosheena. Waxaan aaminsanahay waxay ku saleysantahay shaqsigiisa mana ku koobna fikradaha ama waxa aan aaminsanahay ee ku saabsan isaga. Tixgelinteena fiqi ahaaneed waxay ka timid ficil qoto dheer oo la yaab leh iyo adeecid. Runtii, cilmigu waa aaminsanaanta raadinta waxgarashada.
In kasta oo aan si xushmad leh u baranaynay waxa aan ugu yeedhno Saddex-geesood ahaan, fiqi ahaaneed Masiixa ku saleysan sanadihii la soo dhaafay, fahamkeenna aasaaska maahmaahdeenna dib-u-habeynta ayaa si aad ah u ballaariyey. Hadafkayagu hada waa inaan ku wargalinno wacdiyeyaasha iyo xubnaha WKG wixii ku saabsan sii wadista isbeddelka fiqi ahaaneed ee beeshooda diimeed iyo inaan ugu yeerno inay si firfircoon uga qaybqaataan. Socodkeena guud ee lala socdo Ciise aqoonteena ayaa sii kordheysa oo aad u qoto dheer waxaanna weydiisanaynaa hanuunkiisa tilaabo kasta oo soo socota.
Markii aan si qoto dheer ugu dhex milmeyno maaddadan, waxaan qiraynaa khaldanaanta fahamkeenna iyo kartida aan u leenahay inaan soo gudbino runta noocaas ah. Dhinac, jawaabta ugu habboon uguna waxtar badan ee runta fiqi ahaaneed ee aan ku fahmay Ciise waa in si fudud gacanta loo dhigo afkeena oo aan aamusnaanta aamusnaano. Dhanka kale, waxaan sidoo kale dareemaynaa yeedhitaanka Ruuxa Quduuska ah inaan ku dhawaaqo runtaan - inaad ka soo dul socto saqafyada, ma ahan kibirka ama is-qancinta, laakiin waa jacayl iyo dhamaan cadeynteena la heli karo.
Buug-yaraha WKG Switzerland